Sida loo Xaqiijiyo Rockalldll.dll waa la waayay inaan lagu helin khaladaad
Sida loo Xaqiijiyo Rockalldll.dll Looma Helin ama Dhamaan Khaladka
Tusaha Xallinta Dhibaatooyinka
Waxaa jira dhowr siyaabood oo kala duwan oo khaladaadka rockalldll.dll ku muujin karaan kombuyutarkaaga. Waa kuwan qaar ka mid ah siyaabaha caadiga ah ee laga yaabo in aad aragto qaladaadka rockalldll.dll:
"Rockalldll.dll Lama Helin"
"Codsigan wuxuu ku fashilmay inuu bilaabo waayo dhageysiga rockalldll.dll lama helin.
"Ma heli karno [PATH] \_ rockalldll.dll '
"Faylka rockalldll.dll waa la waayay."
"Ma bilaabi kartid [APPLICATION]. Qeybta loo baahan yahay waa la waayay: rockalldll.dll. Fadlan rakib [ARJIGA] mar labaad."
Xayeysiisyada Rockalldll.dll ayaa laga yaabaa inay muuqdaan marka la isticmaalayo ama lagu rakibayo barnaamijyada qaarkood, marka Windows bilaabanto ama xirto, ama laga yaabee xitaa inta lagu jiro rakibidda Windows.
Xaaladda qaladka dhageysiga rockalldll.dll waa qayb muhiim ah oo macluumaad ah oo caawin doona inta lagu xallinayo dhibaatada.
Sababta Dhibaatooyinka Rockalldll.dll
Dhibaatooyinka Rockalldll.dll waxaa sababa xaalado keeni kara ka saarista ama musuqmaasuqa ah ee fileka DLL ee rockalldll.
Xaaladaha qaarkood, qaladaadka rockalldll.dll waxay tilmaami karaan dhibaatada diiwaanka , fayraska ama dhibaatooyinka nacasta ama xitaa qaliin la'aan.
Ma rabtaa inaad tan saxdo?
Haddii aad xiiseyneysid inaad adigu iskaa u sameysid dhibaatadan, sii wad dhibaatada ku jirta qaybta soo socota.
Haddii kale, fiiri Sideen u Heli Karaa Kombuyuutarkayga? si aad u hesho liis buuxa oo ku saabsan fursadahaaga taageerada, oo lagu daray caawimo ah waxkasta oo la socda sida lagu ogaado kharashyada dayactirka, helitaanka faylashaada, xulashada adeeg dayactir, iyo wax badan oo dhan.
Sidee loo Dhameeyaa Rockalldll.dll Errors
Muhiim: Ha ka soo dhicin rockalldll.dll bogga "DLL download". Waxaa jira sababo badan oo soo-ururinta DLL faylka waa fikrad xun . Haddii aad u baahan tahay nuqulka dhageysiga rockalldll.dll, waxaa ugu wanaagsan in laga helo asalka, asalka sharci ahaan.
Xusuusin: Ku bilaw Windows ee Qaabka Amniga si aad u buuxiso mid ka mid ah tallaabooyinka soo socda haddii aadan awoodin inaad gasho Windows si caadi ah sababta oo ah qaladka rockalldll.dll.
Dib u soo dheji rockalldll.dll ka soo Wareegga Cas . Sababta ugu fudud ee suurtogalka ah ee faylka "rockalldll.dll" maqan waa inaad si qalad ah u tirtirtay.
Haddii aad ka shakisan tahay inaad si khatar ah u tirtirtay rockalldll.dll laakiin aad horey u soo saartey Recycle Bin, waxaa laga yaabaa inaad awooddo inaad soo kabsato rockalldll.dll oo leh barnaamij dib u soo kabasho oo lacag la'aan ah .
Muhiim: Ka soo kabashada nuqul la tirtiro ee rockalldll.dll oo leh barnaamijka soo kabashada file waa fekir caqli ah oo kaliya haddii aad ku kalsoon tahay in aad naftaada ka tirtirtay faylkaaga iyo in ay si fiican u shaqaynaysay ka hor intaadan sidaa samayn.
Samee baaritaanka fayrus / nadaafad ee nidaamkaaga oo idil . Qaar ka mid ah qaladaallada rockalldll.dll waxay la xiriiri karaan fayruska ama infekshan kale oo khatarta ah ee kombiyuutarka kaasoo waxyeeleeyay faylka DLL. Waa xitaa macquul in qaladka dhageysiga rockalldll.dll ee aad aragto ay la xiriirto barnaamijka colaadeed ee ka soo horjeeda faylka.
Isticmaal Nidaamka Dib-u-Celinta si aad u joojiso isbeddelka nidaamka dhawaanta Haddii aad ka shakisan tahay in qaladka dhageysiga rockalldll.dll ay sababtay isbedel lagu sameeyey faylka ama qaabka muhiimka ah, System Restore ayaa xallin kara dhibaatada.
Dib u habee barnaamijka isticmaala faylka rockalldll.dll . Haddii qaladka dhageysiga khatarta ah ee rockalldll.dll wuxuu dhacaa markaad isticmaasho barnaamij gaar ah, dib u sameynta barnaamijka waa inuu bedelaa faylka.
Muhiim: Tijaabi sida ugu fiican ee aad u dhamaystiri lahayd tallaabadan. Dib u samaynta barnaamijka bixiya faylka rockalldll.dll, haddii ay suurtogal tahay, waa suurtagal in la xaliyo qaladkan DLL.
Ku cusbooneysii darawalladaha qalabka maqalka ee laga yaabo inay la xiriiraan rockalldll.dll. Haddii, tusaale ahaan, waxaad helaysaa "Faylka rockalldll.dll waa maqan yahay" markaad ciyaareyso 3D video, isku day inaad la socodsiiso darawaladaada kaarkaaga video .
Fiiro gaar ah: faylka rockalldll.dll waxaa laga yaabaa ama laga yaabo inaan la xiriirin kaararka video - tani waxay ahayd tusaale. Furaha halkan waa in la bixiyo fiiro gaar ah oo ku saabsan sharraxaadda qaladka iyo dhibaatada ku habboon.
Kursiga dib u soo dhig qaabka hore loo rakibay haddii khaladaadka rockalldll.dll bilaabay ka dib markii la cusbooneysiiyey darawal qalab hardware gaar ah.
Hirgalinta sfc / scannow Amarka Faylka File Checker si aad u bedesho nuqul ka maqan ama sax ah oo ka mid ah faylka rockalldll.dll. Haddii dukumintaan DLL ay bixiso Microsoft, qalabkii System File Checker waa inuu soo celiyaa.
Ku rakib wixii cusbooneysiin ah oo cusub oo Windows . Qalab badan oo adeegyo ah iyo qalab kale ayaa badalaya ama cusbooneysiinaya boqolaal Microsoft oo ka mid ah faylasha DLL ee loo qeybiyay kombuyutarkaaga. Faylka rockalldll.dll waxaa lagu dari karaa mid ka mid ah kuwan cusub.
Tijaabi xasuustaada kadibna tijaabiso darawalkaaga adag . Waxaan ka tagnay inta badan qalabka xallinta qalabka ugu dambeeya, laakiin xasuusta kombiyuutarka iyo darawalada adag waa sahlan tahay in la tijaabiyo waana qaybaha ugu caansan ee keeni kara khaladaadka rockalldll.dll marka ay ku guuldareystaan.
Haddii qalabku ku guuldareysto mid ka mid ah imtixaanadaada, beddel xasuusta ama bedelka wadajirka ah sida ugu dhakhsaha badan.
Dayactirkaaga ku rakibo Windows . Haddii shakhsiga dhageysiga rockalldll.dll falanqaynayo talooyinka kor ku xusan waa guuldareyn, fulinta dayactirka bilowga ah ama rakibidda dayactirka waa inay soo celiyaan dhammaan faylasha Windows DLL si ay u shaqeeyaan.
Isticmaal nadiifinta diiwaanka bilaashka ah si aad u hagaajisid arrimaha la xariira rockalldll.dll ee diiwaanka. Barnaamijka nadiifinta diiwaanka bilaashka ah ayaa laga yaabaa inuu awoodo inuu ku caawiyo adigoo ka saaraaya galitaanada diiwaanka kaymaha ee rockalldll.dll oo keeni kara qaladka DLL.
Muhiim: Waxaan dhif nagu soo jeedineynaa isticmaalka nadiifinta diiwaanka. Waxaan ku soo darnay xulkan halkan "isku-daba-daro" ugu dambeyn ka hor tallaabada burburka soo socda.
Sameyso rakibid nadiif ah ee Windows . Nadiifin nadiif ah oo Windows ah ayaa ka saari doonta wax kasta oo ka yimaada wadada adag iyo rakib nuqul cusub oo Windows ah. Haddii aan mid ka mid ah tallaabooyinka kor ku xusan saxda ah ee qaladka rockalldll.dll, tani waa inay noqoto talaabada xigta ee aad.
Muhiim: Dhammaan macluumaadka ku saabsan darawalkaaga adag ayaa laga tirtirayaa inta lagu jiro qalab nadiif ah. Hubi inaad samaysay isku dayga ugu fiican ee suurtogalka ah si loo saxo qaladka dhageysiga ee rockalldll.dll adoo isticmaalaya talaabo xalinta ka hor tan midaan.
Xallinta dhibaatada qalabka haddii khalad dhageysiga rockalldll.dll uu sii jiro. Kadib nadiifinta nadiifinta ee Windows, dhibaatadaada DLL waxay noqon kartaa oo kaliya qalabka la xiriira.
Fariin qalad ah ee rockalldll.dll ayaa laga yaabaa inuu khuseeyo barnaamij kasta ama nidaam laga yaabo inuu isticmaalo faylka mid ka mid ah nidaamyada Microsoft ee ku jira Windows 8 , Windows 7 , Windows Vista , Windows XP , iyo Windows 2000.
Sidee loo Naqshadeeyaa Atl100.dll Looma Helin ama Dhamaan Khaladka
Sida loo Xaqiijiyo D3dx10_43.dll Looma Helin ama Dhamaan Khaladaad
Sida loo WS2_32.dll Loo Helo ama La Dhimo Cilladaha
Sidee loo Xalliyaa Shell32.dll Looma Helin ama Dhamaan Khaladaadka
Sidee loo Xaqiijiyay STOP 0x0000005A Khaladka
Sida loo Xaqiijiyo Comctl32.dll Looma Helin ama Dhamaan Khaladka
Sida loo Xaqiijiyo Window.dll Looma Helin ama La Dhimo
Sida loo qoro Macluumaadka Makiinadaha Raadinta ay Raadi doonaan
Waa maxay Google Earth?
Iibsiga ama Iibsashada Laptops New
"Grand Theft Auto IV: Episodes from Liberty City" khiyaamo PS3 ah
Maxaa ku jira Sanduuqa - Qaadista PS Vita
Solutions to View & Nooc Emoji on PC ama Mac Computer
Sidee looga hortagaa Windows Media Player Crashing
Philips BDP7501 Ultra HD Blu-ray Player - Waxaad u Baahan Tahay Inaad Ogaato
Tusiyaha Hagaha Gargaarka Gawaarida
Helitaanka Qodobka Code of Cheat on PlayStation 2
Disable Xiriirada Wireless-ka ah
Wacom Bamboo Meelaha Sawirada
Sida Loo Helo Furayaasha Waxyaabaha Looga Hortagayo Waraaqaha Hore ee MS Office
Waa maxay DEB Faylka?
Waxyaabaha aan la shaacin ee Google
Dusha Emailka, Tixraaca, iyo Adeegyada Furitaanka
Iskuday Royale FAQ - Iskudhafyada Qabiil ee la Kulmayo CCG Waxay Heshaa MOBA
Cajiibka Dufanka: Daahfadhinta Kartoonka Kaararka
Waa maxay qaabka ugu wanaagsan ee lagu daawan karo TV-ga?
Ugu sareeya 21 Meelaha raadinta Emailka iyo Cinwaanka Tilmaamaha
Sida loo isticmaalo Direct Instagram
Sida loo Isticmaalo Nidaamka Nidaamka Windows XP ee Dib u-Celinta si Undo Xumaado